Aprikose namboly sy fikarakarana | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Aprikose namboly sy fikarakarana
Aprikôty "Prince Prince": fambolena sy fiahiana ao an-jaridaina
Ny Aprikao "Prince Prince" dia tsy mahazatra ny mpikarakara ny zaridaina rehetra, fa mazàna be ny lazany. Variety - tambatra araraka, kiraro sy kavina, araka ny voalazan'ireo mpihinam-bary, dia nipoitra vokatry ny fanangom-bokatra an-tsiramamy vita amin'ny kiraro kiraro. Taorian'izany dia nihatsara kely ny fampidirana ny toetra mampiavaka ny plum.
Aprikôta nambolena sy fikarakarana - fahagagana mahatsiravina amin'ny fahavaratra
Tsy afaka mahita olona tsy nihinana ary tsy nankasitraka ny voan'ny abiko. Io dia vokatra tena mahafinaritra izay mitondra fifaliana sy fahasalamana ihany. Ny famokarana hazo voankazo ao amin'ny zaridinao dia midika hoe mamokatra voankazo mamy ho an'ny fahavaratra, marika manavaka, manangona sy manodina ny ririnina.
Fomba fikarakarana vary varimasina mainty "Black velvet"
Izay tsy mamorona ny mpamboly dia tsy mahagaga ny olona amin'ny zava-bitany. Ohatra, izaho sy ianao dia efa zatra amin'ireo akorandriaka mavokely maromaro, saingy hita fa tsy lavitra ny loko misy azy ihany izany. Noho izany dia asongadinay ny toetoetran'ny abrikô "Black velvet", ny famaritana izay azo antoka fa mahagaga anao.
Black apricot: Fambolena sy fikarakarana ny "Black Kuban"
Samy manana faniriana voajanahary ny mpirotsaka an-tsitrapo sy ireo mpamboly za-draharaha matihanina mba haniry zavatra mahagaga ao amin'ny zaridainy Izany dia azo raisina ho marika mainty, izay nahazo ny anarany noho ny loko tsy mahazatra ny voankazo. Fikarakarana marika "Kuban mainty": Famaritana alohan'ny fanapahan-kevitra hambolena karazana mainty "Kuban mainty", tokony handinika ny famaritana azy ianao mba hahafantarana ny fepetra ilaina hikarakarana ity vokatra ity, ny fomba tokony hikarakarana tsara sy ny zavatra entina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Aprikose namboly sy fikarakarana